Date My Pet » Nhanhatu Red Flags To patepi The First Date
Last updated: Sep. 17 2020 | 3 Maminitsi verenga
Panyaya wokutanga dating, panogona kuva zvikuru kumanikidzwa rakapoteredzwa. Chii kupfeka, apo kuenda uye kunyange chii kutaura. Zvinogona zvose kuva hwavairarama. zvisinei, pane zvishomanana maitiro anokosha chaizvo unofanira kuva wakarindira pazuva rokutanga pamusi. Ndiri kutaura pamusoro tsvuku mureza yambiro zviratidzo nokukarudza.
Zvinonzwisisika kuti huta pazuva rokutanga pamusi, saka Handisi unofanira kuongorora ose mutongo uye sangano renyu zuva kunoita, asi pane mashoma hombe namapoporodzi kuva wakarindira.
Mameseji Munguva Date
Iye zvino ndinonzwisisa tiri kurarama zvemichina rinorema nenzanga, asi chete akaisa foni kure. Mameseji panguva musi inongova tsika wevaFiripi yakadaro. Hapana chinoita kuti munhu anzwe sokuti vachiri uninteresting kuteerera pane mameseji panguva zuva rako. magwaro yako neshamwari dzako vanogona kumirira maawa mashomanana. Saka kana iwe musoro kuti zuva rokutanga, akaisa foni yako pamusoro akanyarara mugoisiira muhomwe yako kana chikwama nokuda Zvakasara zuva. Kana havakwanisi kuisa foni yavo padivi pazuva rokutanga pamusi, kupfuura kunge havazombofi kuisa foni yavo pasi.
Pane musiyano pakati pokuva flirty uye panyaya explicated. Kuita mashomanana mhosva mashoko zvakanaka (akadai muchidimbu complementing hembe yako kana chitarisiko), asi kana vanotanga kuita zvakawanda majee mashoko, unofanira kuongorora zuva rako. Munhu wose anoda kuva kuzadzikiswa, Zvisinei ndine mumwe munhu Vanotsvangadzira gumbo rako kwauri sei zvakaipa vanoda kutora imi kumba inongova dzamira. Kana uri kutsvaka ukama refu, uchida zuva ari kuedza akuzive uye kwete nezvezvandaifanira kuwana kwamuri mubhedha.
Zviri kumbobvira chiratidzo chakanaka kana musi achangodzoka zvakatanga uye iye / iye achitoita achikushora. mienzaniso: kana iwe achangosvika kubva yokurovedza muviri uye kuzivisa zuva rako rino uye pane mhinduro chinhu chakafanana "Oh, saka wako kuti mhando munhu. Total yokurovedza muviri gonzo?"Kana kana wasvikapo kusangana musi kwenyu nekuongorora chii iwe vaipfeka. Kana vari kushora imi ichi mangwanani musi, zvingada kuti muenzaniso richagara uye achava kuramba kutonga sarudzo yenyu.
Talking Way Zvakawandisa About Vakazvipa
Kazhinji A kukurukura zvakanaka chinosanganisira zvakafanana vakagoverana exchanges. Panewo dzimwe kupi kana iwe kana yenyu musi nyara, zvikuru ushamwari mumwe wenyu vaviri achatakura zvimwe kurukurirano, izvo zvakanaka. zvisinei, kana musi kuchikonzerwa mumwe chete angoramba achitaura kukurukura, apo zuva rako nguva dzose achitaura pamusoro pavo, chinova zvishoma Zvinorema. kunyange kuipa, Vakati kukuparadza paunenge uchitaura kutaura zvakawanda pamusoro pavo. A musi mukana wokudzidza zvakawanda pamusoro nemumwe uye ona kuti iwe batanidza, kwete mukana mukana wokutaura pamusoro sei zvinoshamisa uye akakwana muri.
Basa uye Living Situation
Handisi kuti kwete kuenda musi nemunhu anogara pamba uye haashande-upfumi huri oma mazuva ano, zvinonzwisisika. Kana havana vaiva kugadzikana mari kwemakore uye zvinoita munhu akanyanya hwomutambarakede muduku wavo zvipenyu urongwa pamba mubereki wavo, zvichida unofanira kupfuurira. Unofanirawo kunetseka kana havakwanisi kukuudza chii chaizvo zvavanoita mupenyu. Chii saka haavanzi basa rako kuti usingakwanisi kutaurira zuva rako? Unogona asingadi kuziva mhinduro…
Nepo uyu ingaita pachena (somusi wokutanga haasi mukuru nguva yokukurukura yapfuura ukama), kana ivo kurera Eks, teererai sei kutaura nezvavo. Zvinoita yakanaka kana ivo chete zvishoma taura navo, asi kana vakati kwamuri kuti psycho Ivo uye sei zvikuru ivo evanoivenga, here havafaniri kuronga musi wechipiri. Chero nehasha kana anozvideredza hurukuro pamusoro yavo kare ishamwari chinoratidza kuti ivo zvakajeka havana yakasimuka kubva ukama kana kuti inongova anovava uye utsinye, umo nyaya zviri nokuda zvakanakisisa murege kuramba kuvaona.
Five Questions Online Daters vari Waneta Kunzwa
4 Tips nokuda Date First